Madaxa Barcelona Oo Booqday Manchester Si Uu Ugala Hadlo Kooxda Heshiisyada Cavani Iyo Sterling
HomeWararka CiyaarahaMadaxa Barcelona oo booqday Manchester si uu ugala hadlo Kooxda Heshiisyada Cavani iyo Sterling
November 28, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Madaxa suuqa kala iibsiga ee Barcelona Mateu Alemany ayaa soo gaaray Manchester si uu ugala hadlo heshiisyada suurtagalka ah ee Edinson Cavani iyo Raheem Sterling.
Inkastoo ay jiraan arrimo dhaqaale Barca ayaa la filayaa inay xoojiso weerarkeeda bisha Janaayo iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Sergio Aguero lagu qasbi karo inuu ka fariisto ciyaaraha.
Xiddiga Manchester City Sterling ayaa weli si xoogan loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo Catalonia, halka dhaawacyada iyo soo laabashada Cristiano Ronaldo aykeentay Cavani inuu daqiiqado ku dhibtoonayo Manchester United .
Sida laga soo xigtay Radio Barcelona , Alemany ayaa hadda ku sugan Manchester si uu ugala hadlo suurtogalnimada u dhaqaaqista labada ciyaaryahan, inkastoo Sterling uu yahay mudnaanta koowaad ee Barcelona.
Laacibkii hore ee Liverpool ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu tartan cusub la galo, inkastoo warbixintu ay intaas ku dartay in sidoo kale la qorsheynayo inuu wadahadal la yeesho kooxda RB Leipzig ee Dani Olmo .
Tababaraha Barca Xavi ayaa arkay Memphis Depay , Frenkie de Jong iyo Philippe Coutinho oo dhamaantood shabaqa soo taabtay kulankii ay sabtidii 3-1 kaga badiyeen Villarreal horyaalka La Liga.